Ihe ngosi anya na onu ogugu enweghi - Paradoxa drawings
Kedu ihe ị hụrụ?
Eziokwu enweghị ike
Ihe na-aga ebe ahụ?
Ngwunye ndị ọzọ anya
Akwụkwọ na-acha ose dị oke egwu maka ụmụaka nke afọ ọ bụla. Na weebụsaịtị anyị, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe dịgasị iche iche n'isiokwu dị iche iche: Ihe osise nke ihe anya na-enweghị atụ, yana ihe atụ a na-apụghị ime eme, nke a na-akpọ paradoxes, na-adọrọ nwa ọ bụla mfe.
Ihe omuma anya na onu ogugu enweghi ike
Ihe ngosi anya nke oma - aghugho
Igwe ihe anya na-ezo aka n'akụkụ nile nke mmadụ ụgha dị ka okwu mkpokọta.
Nke a nwere ike ime, n'otu aka, mgbe anyị na-ahụ ihe dị iche na ihe ha bụ site na otu ụzọ nke nnọchiteanya.
Ma ọ bụ ndị dị iche iche na otu ụdị template ahụ na-aghọta ihe ndị ọzọ ma ọ bụ naanị ihe na-adọta n'ụzọ ha na-apụghị ime mgbe ọ bụla na ebe a maara nke ọma na ụbụrụ anyị na-enwe mgbagwoju anya.
Nwee obi ụtọ na mwepụ anya anyị. Pịa na njikọ iji gaa na peeji nke na template kwekọrọ:
Kedu akara dị ogologo?
Kedu ọnụ ọgụgụ dị ogologo karịa ndị ọzọ?
Kedu gburugburu dị oke
Ejiri ya ma ọ bụ gbagọrọ agbagọ?
ihe yiri ya
Ejiri ya ma ọ bụ ihe ọjọọ
Kwekọrọ ma ọ bụ?
Ịpị na njikọ ahụ gbanwere na ibe ahụ na template kwekọrọ:
Ụdị ma ọ bụ ite
Ogwe atọ ma ọ bụ anọ?
Echegharị anya - gịnị ka ị hụrụ?
Enweghị ike ime steepụ
Ihe triangle na-enweghị ike ime
Enweghị ike imechi
Enweghị ike ịmata ya
Na foto ndị dị n'okpuru ebe a, ọ na-adị ka ọ bụ ihe na-akpụ akpụ, lee anya! Pịa na foto iji mepee foto:
Mgbochi a na-agagharị .... bụghị
Ọ bụrụ na mmadụ elee onyinyo a anya n'ụzọ dị nro, ọhụụ mmadụ na-enweta mmetụta nke nhazi ọkpụkpụ. N'ezie, ọ dịghị ihe na-akpali na foto a!
Ọzọ, ụbụrụ anyị na-eme ka anyị ghọtakwuo mmekọrịta anyị na anya: nyocha anya na-eme ka e nwee ihe mgbaru ọsọ nke usoro.
Kanisza Square - Ịhụ ihe na-adịghị ahụ
Ọ bụ ezie na anyị kwenyere na ọ bụ ihe doro anya na anya anyị: enweghị square n'etiti, ụbụrụ anyị na-etinyere onyinyo ahụ na-ahụ ihe ndị a ma ama. A maara ihe a dị ka "Kanisza Square".
Nke ahụ niile dị njọ?
N'Ezie? Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, usoro obe dị nnọọ nhata. Ịnwere ike ịlele nke a ma ọ bụ, site na ilekwasị anya na esemokwu abụọ, ị nwere ike ịhụ na usoro niile ahụ dị.
Ezigbo anya maka ndị okenye
Ụmụaka na-ahụ ihe dị nnọọ iche karịa ọtụtụ ndị okenye ...
Ogwu a na - enweghị ike - triangle
Enweghị ike - ọgụgụ
Enweghị ike - akwa mgbago
Echegharị anya - ihe ị na-ahụ